သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်တွင် ကိုလက်စထရော အနည်းငယ် မြင့်တက်ခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နှုန်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြင့်တက်စေနိုင် – Healthy Life Journal
သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်တွင် ကိုလက်စထရော အနည်းငယ် မြင့်တက်ခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နှုန်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြင့်တက်စေနိုင်
Posted on ဇှနျ 25, 2020
———၊ ကိုထက် ၊———
သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်မှာ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောအဆင့် အနည်းငယ်မြင့်တက်တာက ဘ၀နောက်ပိုင်းမှာ နှလုံးရောဂါအန္တရာယ် သိသိသာသာ မြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သတိပေးထားပါတယ်။
အသက် ၃၀၊ ၄၀ အရွယ်မှာ သွေးကြောတွေ ရေရှည်ထိခိုက်မှု စတင်ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း လေ့လာသူတွေကဆိုထားပြီး အသက် ၃၅ နှစ်နဲ့ ၅၅ နှစ်ကြားအရွယ်မှာ ကိုလက်စထရောမြင့်တက်မှု ရှိနေပါက ၁၀ နှစ်ကြာတိုင်း နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်က ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြင့်တက်မှုရှိကြောင်း အမေရိကန် လေ့လာမှုအသစ်အရ သိရပါတယ်။ ဖရာမင်ဟမ် နှလုံးလေ့လာမှုက နှလုံးသွေးကြောရောဂါမရှိတဲ့ ၅၅ နှစ်အရွယ် လူ ၁၄၇၈ ဦးကို ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ရာ သွေးတွင်း နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ ကိုလက်စထရော မြင့်တက်မှုရှိသူတွေက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားမှုရှိတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
၁၁ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်ကြာ ကိုလက်စထရော မြင့်မားသူတွေက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၁၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ တစ်နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ကြာ ကိုလက်စထရော မြင့်မားသူတို့ကမူ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားမှုရှိပြီး ကိုလက်စထရောမြင့်မားမှု မရှိသူတို့ကမူ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ မြင့်တက်မှုရှိကြောင်း လေ့လာမှုအရ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလေ့လာမှုရလဒ်အရ ကိုလက်စထရောမြင့်တက်မှု ၁၀ နှစ်ကြာတိုင်း နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားမှုရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
“အသက် ၃၀ နဲ့ ၄၀ အရွယ်တွေမှာ ကိုလက်စထရော မြင့်တက်တာကြောင့် အသက် ၅၀၊ ၆၀ နဲ့ ၇၀ အရွယ်တွေမှာ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်က ဆေးလိပ်မသောက်ဘူး၊ သွေးဖိအားနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပုံမှန်ရှိအောင် ထိန်းနိုင်တယ်၊ ဆီးချိုရောဂါ မရှိဘူးဆိုရင်တောင် ကိုလက်စထရော မြင့်တက်နေရင် ရေရှည်မှာ နှလုံးအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တုန်းပါပဲ”လို့ ဒတ်ခ်ဆေးတက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှုခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာအန်းမာ ရီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Related Items:healthy, heart care, heart disease
အိပ်ချိန်နည်းတဲ့သူတွေ ပိုဝပါသလား . . .
ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကင်ဆာလူနာများကို အဝေးရောက် Viber ဗီဒီယိုဖြင့် အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးနေ
ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း အခမဲ့ ကင်ဆာဆေးသွင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံတွင် ဆောင်ရွက်ပေးနေ
“ အမျိုးသမီး မပြီးနိုင်ရောဂါ”
မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းဆေး၊ သားအိမ်ကျဉ်းဆေး၊ သားအိမ်သန့်ဆေးများအကြောင်း
မက်ဖော်မင်သောက်ရင် ကျောက်ကပ်ထိပါသလား . . .
အိပ်တဲ့အခါ ခေါင်းအုံးအဆင်မပြေရင် ကျန်းမာရေးပြဿနာ (၇) ရပ်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
ဗိုက်ပူနေပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းကို အချိန်အပြည့်အ၀ပေးပြီး မလုပ်နိုင်သူတို့အတွက် ရိုးစင်းသော လေ့ကျင့်ခန်း